I-FAQ yochungechunge lokunisela ngenkasa - i-Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Ngidinga isihlungi sokunisela ngenkasa?
Yebo. Njalo izidingo zokunisela ngenkasa ukuba ne- isihlungi. Noma ngabe amanzi akho ahlanzeke kanjani, a isihlungi umshuwalense oshibhile wokuqapha imfucumfucu engena ku- uhlelo lokunisela. Ngisho nezinhlayiya ezincane emanzini zingadala ukuvuza emitters ukuvinjelwa.
Yimuphi umkhombandlela umbala wombala obhekene nawo lapho ufaka?
Bhekisa phezulu, ukuze amanzi abheke phezulu ukugwema udaka, isihlabathi kanye nokhula ukungena.
Ngabe ngidinga ukukhipha isistimu yami ngemuva kokufaka umquba?
Njalo ukugeleza i uhlelo ngemuva kokufaka umquba ukunakekela kahle i- uhlelo lokunisela. Lokhu kubaluleke kakhulu uma usebenzisa okuphilayo Umanyolo.
Ngingalushayela kanjani uhlelo lokunisela ngenkasa?
Ukuqhuma i uhlelo ngamanzi ahlanzekile ngale ndlela elandelayo: ukugeleza ama-mainline kuqala, bese kuba imigqa eninginingi futhi ekugcineni i- ukuvuza imigqa ngokuvula imigqa eminingana ngasikhathi (isibonelo: imigqa eyishumi) ukuze kugcinwe ingcindezi eyanele ukuze ibe namandla ukugeleza. Ukuqhuma olayini cishe umzuzu owodwa noma kuze kucace amanzi.
Uyini umehluko phakathi kwe-drip tape ne-drip line?
Ulayini wokudonsa iyafana ne- i-tape yokudonsa ngoba ine-emitters yamazinga okukhishwa ahlukahlukene afakwe ngezikhathi ezilinganiselwe, kepha ukufana kumisa lapho. Ngokungafani i-tape yokudonsa, ulayini wokudonsa kukhawulwe ngobude emikhawulweni efanayo yeshubhu le-poly losayizi ohambelana nalo
Ungakubala Kanjani Ukuthisela Ukugeleza Kwedriphu？
(1)Phindaphinda inani lama-emitters yi-GPH ukuze uthole inani lakho ukuchelela ngenkasa isilinganiso sokugeleza, uma zonke izikhiphi zakho zinezinga elifanayo le-GPH.
(2)Isibonelo, uma unama-emitters angama-20 wonke anezinga lokugeleza kwe-2 GPH, ingqikithi yakho ukuchelela ngenkasa isilinganiso sokugeleza yi-40 GPH (20 emitters x 2 GPH = 40 total GPH).
Ingabe ama-drip tape emitters aya phezulu noma phansi?
Noma iyiphi indlela okhetha ukuyifaka i-tape yokudonsa sicela uqinisekise ukuthi emitters ubuso phezulu. Lokhu kunciphisa ukuvaleka okubangelwa ukumunca ukungcola nemfucumfucu ekuvaleni-phansi. Imvamisa ukumboza i- iteyipu ngamasentimitha ambalwa nje omhlabathi noma isembozo semifino kuyasiza kakhulu.
Ihlala isikhathi esingakanani ithephu yokudonsa?
Isikhathi eside kangakanani Ngabe i- I-Drip Tape ekugcineni? 8-mil i-tape yokudonsa isetshenziswa kanye futhi ilahliwe. 10-mil iteyipu isetshenziselwa inhlabathi enamadwala noma izitshalo ezingaphezulu. 15-mil iteyipu imvamisa ilungile iminyaka engu-3-5 njenge yinde njengoba isihlungi nomlawuli basebenza kahle.
Ngingayisebenzisa kabusha iteyipu yokuvuza?
Uma ungakhuli unyaka wonke engadini wena ingasebenzisa kabusha i iteyipu ngenkathi yokukhula elandelayo. Vele uqiniseke ukuthi ugeza konke ukufakwa futhi ususe kahle inhlabathi kanye ne-grit kusuka kumantongomane nase-barb ezungezile ukuze zisebenze kahle ngokuzayo lapho uzisebenzisa.
Ngabe i-tape yokudonsa ingangcwatshwa?
I-drip tape ingakwazi kube wangcwatshwa kuze kube ngamasentimitha ayisithupha ukujula enhlabathini. Uvame ukungcwaba eyakhe kuphela iteyipu cishe amasentimitha amathathu kuya kwamane ukujula emhlabathini.
Uyikhipha kanjani i-tape ye-drip?
Vula i-valve yesango emthonjeni wamanzi noma uma usebenzisa ipompo lamanzi, vula ipompo lamanzi bese usebenzisa i ukuchelela uhlelo okungenani ihora. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi isisombululo samanzi esidi singeniswa ohlelweni ngomugqa oyinhloko futhi lokhu kuzosula ukwakheka kwamagciwane ngaphakathi kohlelo.
Ngabe imigqa yedonsi iyavaleka?
Ngeshwa, ishubhu ku- uhlelo lokudonsa lungavinjelwa ngokwakhiwa kwamaminerali noma kwamagciwane. Ukuhlanza i- uhlelo ngamanzi okungenani kathathu ngesizini can khipha ukuvinjelwa okuncane futhi uvimbele ama-clogs ukuthi angakheki kwasekuqaleni. Uma ngabe uhlelo imisiwe impela, kungadingeka i-acid flush
Ngingalususa kanjani uhlelo lwami lokunisela ngenkasa?
1.Okokuqala qiniseka ukuvula i-sprinkler uhlelo ukugwema izehlakalo.
2.Ngokulandelayo uzodinga ukususa yonke imibhobho namakhanda okufafaza.
3.Bese uvula amanzi bese uwavumela ukuba agijime aze agele amanzi avule ikhanda ngalinye ukukhipha noma imuphi udoti ngaphakathi kwesifafazi izinhlelo
Uyini umehluko phakathi kwe-dripline ne-drip tape?
Yikuphi okungcono ukuvuza tape noma drip umugqa?
Lapho kudingeka ubude obude, njengokulima noma ukufaka izicelo ezinde zokuhlala, i-tape yokudonsa imvamisa kuyisixazululo. I-tape yokudonsa ivame ukusetshenziselwa izinhlelo ezinengcindezi ephansi, isebenza kahle ku-8-15 PSI. Ngenkathi i-tape yokudonsa ingasetshenziswa ngobude obude kune-poly tubing kanye ne- ulayini wokudonsa, akunamkhawulo ngokuphelele